JA Manafaru Resort Maldives: Mijanona noana ary eto no maninona?
Home » etn » JA Manafaru Resort Maldives: Mijanona noana ary eto no maninona?
Villa manafaru masoandro miposaka masoandro manafaru misy piscine infinity 1 jpg
JA Manafaru Maldives dia nanambara ny fiasan'ny tenany manokana amin'ny maha-Resort rehetra, manome ny vahiny vola vidiny lafo indrindra eto amin'ny nosy hatramin'izao.
Tale jeneraly, Karen Merrick naneho hevitra 'Raha vantany vao manitsaka ity nosy paradisa ity ianao, dia hihena ny fanahianao rehetra. Tsy tokony handany fotoana fohy hanandrana hametraka vidiny ao an-dohan'izy ireo ny vahininay, tianay izy ireo hiaina fitsoahana madio ary fifandraisana lalina sy mahatadidy ireo manodidina voajanahary mahavariana. Io no sanda tsara indrindra natolotray, ka maro ny vahiny izao no hanana ny fotoana hiainany JA Manafaru. '
Voninkazo amoron-dranomasina vovoka mahafinaritra sy rano madio mangarahara miaraka amin'ny fiainana an-dranomasina any ivelany, ilay fialokalofana tsara tarehy dia ahitana villa amoron-dranomasina 84 sy trano be rano sy trano honenana, samy manana ny pisidiny manokana. Toerana fisakafoanana mahafinaritra fito no manome safidy betsaka miaraka amin'ny sakafo nentim-paharazana ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, saran-dàlana iraisam-pirenena ary fety amin'ny hazan-dranomasina izay misy amin'ny drafitra All-Inclusive. Ilay trano fisakafoanana manao sonia manaitaitra - White Orchid, dia mipetraka eo afovoan'ny ranomasina mitsabo ny vahiny amin'ny rivotra mahery rehefa mankafy ny sarany aziatika azony. Afaka misitraka zava-pisotro be dia be ihany koa ny vahiny amin'ny toerana maro isan-karazany ao anatin'izany ny Horizon Lounge miaraka amin'ny fahitana ny ranomasina, Andiamo Bistro ary Pool miaraka amin'ny tontolony maitso maitso sy ny Ocean Grill, fisakafoanana amoron-dranomasina mahatalanjona eo ambanin'ny kintana.
Betsaka ny hetsika ho an'ny olon-dehibe sy ankizy manana ivon-drano antsitrika SSI ho an'ireo vao manomboka sy mpisitrika efa za-draharaha, miaraka amin'ny foibe fanatanjahan-tena amin'ny rano manolotra sidina, jetskiing, ski-rano, ski-mono, seabob, funtubing, wakeboarding, fisidinan-drano, kayak, fijoroana sambo, sambo catamaran ary lakana. Misy ihany koa ny Ivotoerana fanentanana an-dranomasina hitehirizana ny ekolojia eo an-toerana, ary koa ny volley volley, pitch futsal, kianja tenisy, kianja badminton, latabatra fisakafoanana, foibem-panatanjahan-tena, efitrano filalaovana mahjong ary tranomboky mahafinaritra. Afaka mandray anjara amin'ny kilasy fandrahoan-tsakafo Maldiviana, mijery feso, fitsangantsanganana an-tsambo mahafinaritra, fitsidihana nosy eo an-toerana, fitsangantsanganana fanjonoana, fotoam-pivoriana yoga ary milalao eo amin'ny sehatry ny fiara golf eco. Misy ihany koa ny Calm Spa & Sanctuary izay nahazo loka, izay nanolotra Ayurveda, aromatherapy ary dia tsara ho an'ny fanahy. Mba hitazomana ny taona rehetra hialana voly dia samy misy ny Klioban'ny Ankizy sy ny Ankizy.
Thailandy mametraka ny fiarovana ny fizahantany mandritra ny New Year Celebration Songkran
Nihemotra ny forum de l'Investissement Hôtelier Africaain